‘चैतमा बिदेशबाट आएका सबै नेपाली क्वारेन्टाइनमा बस्नपर्छ’ – Karnalisandesh
‘चैतमा बिदेशबाट आएका सबै नेपाली क्वारेन्टाइनमा बस्नपर्छ’
प्रकाशित मितिः १५ चैत्र २०७६, शनिबार ११:०९ March 28, 2020
काठमाडौँ। अनेरास्ववियूका नेता रश्मि आचार्यले चैत महिनामा बिदेशबाट नेपाल फर्किएका सबै नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुले होम क्वारेन्टाइन तथा सरकारले तोकेको स्थानमा बस्न सुझाव दिएका छन्।
साथै उनले विश्व माहामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ लाई परास्त गर्नका लागि चैत महिना स्वदेश फर्केका सबै नेपालीहरुले क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा राखेका सुझावहरु निम्न प्रकार छन्:
१) कृपया, तपाईं अब कम्तिमा १० दिन अरुको सम्पर्कमा नगइदिनुहोस्। Home Quarantine वा सरकारले तोकेको स्थानमा बसिदिनुहोस्।
२) तपाईं नेपाल आएपछि यस विचमा कहाँ कहाँ पुग्नुभयो ? को कोसँग भेट्नु भयो ? Contact History सरकारका संरचनाहरुलाई तत्काल बताइदिनुहोस्।
३) कोरोनाको लक्षणसंग मिल्दो अवस्था देखिए यथाशिघ्र सरकारले तोकेका अस्पताल जानुहोस्।
४) तपाईको कारण यतिबेला सबै भन्दा बढी असुरक्षित तपाईकै परिवार छ। त्यसपछि तपाईका इष्टमित्र र साथिहरु त्यो जोखिमको घेरामा छन्। यदि तपाईं उनीहरू सुरक्षित भएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया उनीहरुदेखि टाढै बस्नुस्। आजको दिनमा तपाईले परिवार र समाजको लागि खेल्ने पहिलो भूमिका यहि हो।
५) त्यहि परिवारको सुखको लागि तपाईं बिदेसिनु भयोे। अनेकौं दु:ख कष्ट झेल्नु भयो। रगत/ पसिना बगाउनु भयो। हरेक क्षण जीवन हत्केलामा राख्नु भयो। तपाईंको परिवारमा कतैबाट संकट नआओस् भन्ने तपाईंकै चहाना पुरा गर्न तपाई उनीहरूबाट अब मात्र १० दिन अलग बसिदिनुहोस्। परिवारमा खुसी भर्न यत्रो वर्ष परदेश बस्नु भएको तपाईं आफ्नै परिवारको सुरक्षाको लागि के थप १० दिन Quarantine मा बस्न सक्नु हुन्न र ?
६) याद गर्नुहोस्, तपाईंको एउटा असावधानीले परिवार संकटमा पर्न सक्छ, समाज संकटमा पर्न सक्छ, अन्तत: देशलाई महासंकटले घेर्न सक्छ। त्यसैले सचेत बन्नुहोस्। नेपाल सरकारले भनेका सबै नियम मेरा लागि हुन्, परिवारको सुरक्षाको लागि हुन् भन्ने बुझ्नुहोस्।
७) मलाई के भएको छ र? केहि भएको छैन भनेर आफै डाक्टर नबन्नुहोस्। उहाँलाई केहि भएकै छैन, किन Quarantine मा बस्ने भनेर परिवारलाई भन्न नलगाउनुस्। COVID-19 ले पत्तै नपाई विश्वलाई हायलकायल बनाएको छ। शक्तिशाली भनिएका देशहरु यसका अगाडी कमजोर सावित भएका छन्। नेपालबाट यसलाई परास्त गर्न तपाई एउटा सचेत नागरिक बनिदिनुहोस्। बस् ! यति भए पुग्छ। तपाईले यति गर्नुभयो भने देश, समाज र तपाइकै परिवारको कल्याण हुनेछ। नेपालले COVID-19 को विरुद्ध लडाई सजिलै जित्नेछ। तपाई त्यस लडाईको एउटा भरपर्दो सिपाही हुनुहुनेछ।
कोरोना भाइरसका कारण इटलीमा एकैदिन ९ सय १९ जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै इटलीमा मृतकको संख्या ९ हजार १ सय ३४ पुगेको छ। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३० हजारको नजिक पुगेको छ।
वर्ल्डोमिटरका अनुसार यहाँ ५ हजार ९ सय ९ संक्रमित थपिएसँगै कूल संक्रमितको संख्या ८६ हजार ४ सय ९८ पुगेको छ । उता अमेरिकामा संक्रमितको रेकर्डस्तरको वृद्धि भएको छ । १७ हजार २९ जना नयाँ संक्रमित देखिएपछि यहाँ कूल संक्रमितको संख्या १ लाख २ हजार ४ सय ६४ पुगेको छ।
साथै यहाँ एकैदिन ३ सय १२ जनाको मृत्यु भएको छ । यससँगै मृततको संख्या १ हजार २ सय ७ पुगेको छ। अमेरिका कोरोना भाइरसको नयाँ ‘इपिसेन्टर’ बन्ने खतरा भएको विभिन्न विज्ञले चेतावनी दिँदै आएका छन् ।